AKHRI:— MADAXWEYNE SIILAANYO OO CAALAMKA U BANDHIGAY IN DIMUQRAADIYADA SOMALILAND KU TIMID RABITAANKA SHACABKA | Maalmahanews
AKHRI:— MADAXWEYNE SIILAANYO OO CAALAMKA U BANDHIGAY IN DIMUQRAADIYADA SOMALILAND KU TIMID RABITAANKA SHACABKA
Hargeysa (Maalimahanews.com)- Madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland, Mudane Axmed Maxamed Maxamuud (Siilaanyo), ayaa sheegay in dimuqraadiyada iyo doorashooyinku aanay ahayn wax ay Somaliland ku cadaadinayaan beesha caalamku, hase ahaatee dimuqraadiyadu ay ku jirto masaalixda ummadda Somaliland.
Waxa kaloo madaxweyne Axmed Siilaanyo uu sheegay in xukuumadiisa iyo komishankaba ay iska kaashanayaan sidii ay doorashada madaxtooyadu ugu qabsoomi lahayd wakhtigeedii.
Madaxweynuhu wuxuu sidaas ka sheegay kulan ballaadhan oo uu shalay xafiiskiisa kula yeeshay wefti culus oo ka socda beesha caalamka.
Afhayeenka Madaxtooyada Eng. Xuseen Aadan Cigge (Dayr), ayaa war-saxaafadeed uu xalay soo saaray faahfaahin kaga bixiyay qodobadii kulankaas labada dhinac ku falanqeeyeen, waxaanu u qornaa sidan:-
“Madaxweynaha JSL Mudane Axmed Maxamed Siilanyo ayaa maanta(shalay) 04.10.2017 Xafiiskiisa ku qaabilay Wefti Culus oo ka socday Daneeyayaasha Beesha Caalamka ee Doorashada Madaxtooyada Somaliland oo u muddaysan 13.11.2017ka koobnaa Waddamada Somaliland ka taageera xagga Horumarka iyo Dimuqraadiyadda. Kulanka waxa Madaxweynaha ku wehelinayey Madaxweyne-ku-xigeenka, Wasiirka Arrimaha Dibedda, Wasiirka Arrimaha Gudaha, Af-hayeenka Madaxtooyada iyo Xoghayaha Gaarka ah ee Madaxweynaha.
Madaxa Dawladda Ingiriiska ee u qaabilsan Somaliland(Mrs. Rosie Tapper);
Qusulka Safaaradda Faransiiska(Mr. Emmanuel Dagron);
Madaxweyne Axmed Maxamed Silaanyo ayaa ugu horrayn wuxuu weftiga Danjirayaasha dalalka safka hore kaga jira taageerada horumarinta Somaliland uga mahad-naqay booqashada qiimaha leh ee ay ku yimaadeen Jamhuuriyadda Somaliland iyo waqtigoodaa qaaliga ee ay u soo hureen. Madaxweynuhu wuxuu xubnaha weftiga u sheegay in Waddamada ay matalaan yihiin saaxiibo qiimo badan oo ay Somaliland leedahay, oo si joogto ah Somaliland uga taageera xagga Horumarka iyo Hannaanka Dimuqraadiyada.Sidaa darteed, waxa labadeena dhinacba la inooga baahan yahay in la dar-dar geliyo lana xoojiyo xidhiidhka iskaashi iyo danaha dhinacyada badan leh ee ka dhexeeya Somaliland iyo Waddamada ay matalaan.
Madaxweynaha Jam. Somaliland wuxuu weftiga si gaar ah ugala hadlay arrimo muhiim ah oo lagama maarmaan u ah Danaha iyo Maslaxadaha dalka iyo dadka Somaliland, oo ay ugu mudnaayeen nabadda iyo xasiloonida dalka iyo doorashada Madaxtooyada ee inagu soo fool leh. Madaxweyne Axmed Maxamed Siilaanyo waxa uu Weftiga Danjirayaasha iyo weftigii ay hoggaaminayeen si gaar ah ugaga mahad naqay taageerada iyo kaalmada ay sannado badan ka geystaaan Geeddi-socodka Hannaanka Dimuqraadiyadda ee Jam. Somaliland. Madaxweynuhu wuxuu weftigii ka socday Daneeyayaasha Beesha Caalamka u sheegay ama ku yidhi “Jamhuuriyadda Somaliland waa dal ka soo kabtay cadaadis, colaado iyo dagaallo ummadooda lagula kacay, kuwaasoo soo taxnaa sannadihii 80-nadii ilaa 90-shanadii. Somaliland waa dal ku guulaystay inuu dhiso qaran ku qotoma nabad, xasilooni iyo hannaan dimuqraadi oo dhab ah. Geedi socodka hannaanka dimuqraadiyadda ee ka hana-qaaday Dalkayaga waa mid si dhab ah uga ka go’an Shacabka Somaliland. Taasina waxaa markhaati cad u ah doorashooyinkii kala duwanaa ee Somaliland ka qabsoomay, kuwaasoo dhammaantood ku dhacay sifo dimuqraadi, hoggaanka dalkana loola kala wareegay isu-hanayn, niyadsami iyo isu hambalyayn. Xukuumadda aan gadh-wadeenka ka ahay iyo Komishanka Doorashooyinkaba waxa ka go’an qabsoomidda Doorashada Madaxtooyada ee innagu soo fool leh, taasoo u muddaysan 13.11.2017.
“Xukuumadda aan gadh-wadeenka ka ahay waxay qaaday tallaabo kasta oo suurto galinaysa inay dalka ka qabsoonto Doorasho Madaxtooyo oo xor iyo Xalaal ah, annagoo kafaalo qaadnay wixii kharash ah ee hawshaa ku baxaya. Dhinaca kale, hawl-wadeenada xukuumadda waxaan awaamiir adag ku siiyey in ay juhdi iyo dedaal badan geliyaan gudashada xilka kaga beegan meel marinta qabsoomidda Doorashada Madaxtooyada ee innagu soo fool leh, taasina waxaa tusaale wacan u ah Digreetooyinkii aan soo saaray ee khuseeyey: Reebbanaanta u adeegsiga Hantida Qaranka Ololaha Xisbiyada; Isticmaalka Warbaahinta Dawladda iyo fagaarayaasha wakhtiga Ololaha Doorashada iyo Gacan siinta Komishanka Doorashooyinka Qaranka.”
Weftiga Daneeyayaasha Beesha Caalamka ee Doorashada Madaxtooyada Somaliland waxa kale oo ay hoosta ka xarriiqeen sida ay ula dhacsan yihiin Wareegtooyinkii uu Madaxweynuhu soo saaray 30 September 2017 oo ay ku tilmaameen inaya ahaayeen “HIIGSI XASAASI AH OO AAD QARAN AHAAN GAADHEEN”. Ugu dambayntii Weftigii Daneeyayaasha Beesha Caalamka ee Doorashada Madaxtooyada Somaliland ee Madaxweynuhu qaabilay taageerada ay u hayaan in Somaliland ay ka dhacdo Doorasho Xor iyo Xalaal ah. Taasina ay kor u sii qaadi doonto Taageerada, Sumcadda, Karaamada iyo Kalsoonida ay Beesha Caalamku ku qabto JSL. Waxay ummadda Somaliland ku booriyeen in doorashada soo socota 13.11.2017 looga qayb qaato si nabad gelyo leh, iyagoo tartamayaasha ku dhiirri galiyey inay aqbalaan una hoggaansamaan natiijada ka soo baxda doorashada.”